ကောက်ညှင်းထောင်းပဲအုပ် အိုဟဂိ お萩 ~ ဂျပန်ပြည်မှပါးသောစာလွှာ . . .
ယောက္ခမ ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ။မုန့် လုပ်နည်းယူထားပါတယ်။ အဆင်ပြေတဲ့နေ့ လုပ်စားပါမယ်။ယောက္ခမ ကိုလည်း မုန့် လုပ်နည်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပေးပါနော်။
အဆင့်ဆင့်လေးပုံတွေနဲ့ ရှင်းပြသွားလို့ ရှင်းပြီးလုပ်စားကြည့်ချင်လာတယ်။အိုင်အိုရာ
ကောက်ညှင်းကို အကြိုက်ကြီး မဟုတ်ပေမဲ့ စားတော့ စားကြည့်ချင်သား။ ခပ်ဆိမ့်ဆိမ့် အရသာထွက်မဲ့ပုံဘဲ။
အင်းနော် အတော်စိတ်သဘောကောင်းတဲ့ ယောက္ခမဘဲချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ.. မုန့်ကလေးက စားဖို့နှမြောစရာ ချစ်ဖို့ဘဲ ကောင်းတော့တယ်. မစားဖူးသေးဘူး စားကြည့်ချင်သေးတယ်
ဟုတ် မချော လွယ်လွယ်လေးရယ် လုပ်စားကြည့်နော်：）））
မမိုးဝါရေအမှုန့်တွေဆိုနောက်မှာ ခို （粉）ပါပါတယ်။ကောက်ညှင်းက もち（餅）လို့ခေါ်တာမို့ ကောက်ညှင်းမှုန့်က မိုချိကို もちこ（餅粉）ပုံကhttp://image.search.yahoo.co.jp/search?p=%E9%A4%85%E7%B2%89&ei=UTF-8ဆန်က ခိုမဲ့こめ（ 米）လို့ခေါ်တာမို့ ဆန်မှုန့်က ခိုမဲ့ကို こめこ（米粉）လို့ခေါ်ပါတယ်မ။ပုံကhttp://image.search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&fr=slv1-tospcc3&p=%E7%B1%B3%E7%B2%89：））